Taliyaha Milatariga Soomaaliya oo Mareyknka ka dalbaday in ay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah Al-shabab. – Hornafrik Media Network
Taliyaha Milatariga Soomaaliya oo Mareyknka ka dalbaday in ay kordhiyaan weerarada ka dhanka ah Al-shabab.
By HornAfrik	 On Sep 7, 2018
HornAfrik-Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya S/gaas Daahir Aadan Cilmi “Indhaqarshe” ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Saraakiil ka socday dawladda Mareykanka, waxaana ay kawada hadleen dib u dhiska ciidanka xoogga dalka iyo taageeridooda.
Si gaar ah ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen siddii dawladda Mareykanka ay ciidanka Xoogga dalka uga taageeri laheyd xoreynta dalka Tababarka Ciidanka , is dhaafsiga qibradaha dhanka ciidanka iyo qodobo kale.
S/gaas Daahir Aadan Cilmi Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa ka dalbaday sarakiisha mareykanka ee jooga magaalada muqdisho inay sii labba jibaaraan weerarada ka dhanka ah al shabaab ee ay ka fuliyaan gobalada dalkeena soomaaliya si buu yiri dhaqsi looga saaro al shabaab qeebaha ay kagga suganyihiin goblada dalka.
Madaxweyne farmaajo waxa uu dalbaday in si deg deg ah looga saaro al shabaab qeebaha soomaaliya ay kaga suganyihiin taa badalkeedane waxa ay keentay in dowladda soomaaliya ay shaaciso dhowaan in dagaal safmareen ah ay qaadi doonta hayeeshee la doonayo dagaalkaasi in looga sifeynayo dalka cadawga argagixisada ah ee kusoo duulay islamarkaana dhameynaya shacavbka soomaaliyeed,, sidaasi waxcaa yiri taliye indha qarshe mar uu hadlay.
Dawladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha sida gaarka ah Soomaaliya uga caawiya dhanka tababarada Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed la tagaalanka al shabaab.
Saraakiisha mareykanka ee soomaaliya jooga ayaa dhowr jeer waxaa ay ka fuliyeen soomaaliya howlgalo kuwaa oo badankood lala eegtay ciidamo iyo saraakiil sar sare ee ka tirsan al shabaab.
Shirkii wasiiro dibadeedyada ee Jabuuti oo war laga soo saaray.